Adeegga - Guangdong Fineco Machinery Group Co., Ltd.
Adeegga Iibka Kahor iyo Iibinta Ka Dib
Fineco waxay xafiisyo ku leedahay wadamo badan.Waxaanan leenahay injineer xirfadle ah oo diyaar u ah caawinta wakhti kasta, waxaan diyaar u ahay inaan daryeelo dhammaan mashaakilaadka mashiinkaaga.Way adag tahay in la kordhiyo wax soo saarka?Qiimaha shaqadu aad buu qaali u yahay?Dhibaato ma ku haysaa wax ka qabashada arrimaha wax soo saarka?Nala soo xidhiidh, lacag la'aana si aan kuugu siino xalalka mashiinka si aad wax uga qabato dhibaatooyinka wax soo saarka.
1 sano oo dammaanad adeeg ah, adeeg soo celinta dhibaatooyinka tayada.
Waxaan u habeyn karnaa mashiinka sida waafaqsan shuruudahaaga, haddii ay ku xiran tahay khadka wax soo saarka, hoos u dhigista booska wax soo saarka, kordhinta awoodda iyo wixii la mid ah waxaan ku qancin karnaa.
Wax soo saar xooggan
Kooxda wax soo saarka ee shirkadu waa dhammaan masters kuwaas oo ka shaqeynayay in ka badan 3 sano.Waxtarka naqshadeynta, rakibidda iyo ciribtirka mashiinka ayaa ah midka ugu sarreeya ee warshadaha.Mashiinka aan caadiga ahayn wuxuu ballan qaadayaa inuu alaabta ku keeno 3 maalmood ugu horrayn iyo 14 maalmood ugu dambayn.
Fiidiyowga/Buug-gacmeedka oo faahfaahsan
Uma baahnid inaad ka walwasho qaliinka markaad codsanayso mishiinka Fineco.Fiidiyow/ buug-tilmaameed tafatiran oo ka yimid Daar si toos ah ayaa lagu siin doonaa mishiinka.
Ku martiqaad macaamiisha inay soo booqdaan oo ay wada xaajoodaan
Dhammaan macaamiishu waxay haystaan ​​fursad ay ku aqbalaan martiqaadkayaga si ay u soo booqdaan shirkadeena, dhammaan kharashyada jidka waxaa qaadi doona Fineco